Vokatry ny « appel à manifestation d’intérêt » (AMI) amin’ny fifantenana ireo kaominina mahazo tombontsoa amin’ny tetikasa « Ohatrinona ny tetibolan’ny kaominina misy ahy ? » tontosain’i TI-IM avy amin’ny fanohanana ara-bolan’ny tahirimbola PISCCA an’ny m - Transparency International - Initiative Madagascar
Nivoaka ny 08 Novambra 2016 ao amin'ny
Taorian’ny fandinihana ny antonta-taratasim-pisoratana anarana amin’ny AMI nataon’ireo komitin’ny fifantenana eo anivon’i Transparency International-Initiative Madagascar (TI-IM) izay notontosaina tao amin’ny biraon’ny TI-IM ny 20 sy 21 oktobra 2016. 15 ireo kaominina voafantina. Valo (08) amin’ireo kaominina ao amin’ny faritra DIANA ary fito (07) amin’ireo kaominina ao amin’ny faritra BOENY dia hahazo ny fanohanana arateknika amin’ny fitantanam-bola mirindra sy mangarahara ao anatin’ilay tetikasa “Ohatrinona ny tetibolan’ny kaominina misy ahy?”
Ireto kaominina 15 manaraka ireto no voafantin’I TI-IM ho manana finiavana indrindra amin’ny tetikasa sy nahafeno ireo fepetra takian’ny fifantenana. Ireo izay miankina amin’ny fahaiza-mitantana fototra, ny famenoana ireo antonta-taratasim-pisoratana anarana (taratasim-pisoratan’anarana, naoty tapaky ny filankevitra kaominaly ary ny taratasy manaporofo ny finiavana), ny fahamoran’ny fankanesana any amin’ny kaominina ary ny halavirana ara-jeografika.
Lisitr’ireo kaominina voafantina ao amin’ny faritra Boeny:
Naoty azo amin’ny 20
Lisitr’ireo kaominina voafantina tao amin’ny faritra DIANA:
Ny kaominina tsy voalahatra ao amin’ireo fafana ireo dia tsy voafantina nohon’ny antony tsy nahatratraran’izy ireo ny fepetra fifantenana sy/na ny tsy fahampian’ny antonta-taratasy. Rah te hahazo fanazavana fanampiny ireo izay nisoratra anarana amin’ny fifantenana ny kaominina dia afaka mandefa fangatahana amin’ny mailaka jremi@transparency.mg ho an’ny faritra DIANA na srakotomanga@transparency.mg ho an’ny faritra Boeny.